လေနုအေး: မရိုးနိုင်တဲ့ ပုံပြင်လေး
Posted by တန်ခူး at 5:31 PM
Happy Birthday ပါ တူလေးရေ့ ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ လေးဖြစ်ပါစေ။ချစ်သော ဖေဖေ မေမေ နဲ့မွေး နေ့ တိုင်းဆင်နွှဲနိုင်ပါစေဗျာ
“ရေသေးသေးလေးသောက်မယ်” ဆိုတဲ့ ခလေး လေး ကိုတစ်ခါလောက်တော့တွေ့ ဖူးချင်လိုက်တာ :)
မရေ.. သားသားလေးကို Happy Birthday လို့ပြောပေးပါဦး..
~~ လေးနှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာ သားလေး ပျော်ရွှင်ပါစေ။ မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့သားလိမ္မာလေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.. ~~
သားလေးက သြဂုတ်လမွေးတာကိုး။ အခုတလော ကလေးမွေးနေ့တွေက သြဂုတ်လတွေများနေတယ်။ အဟဲ.. သူများလည်း သြဂုတ်လမွေးတာပဲ.. အဲဒါဆိုတော့ သေချာတယ် မတန်ခူး သားလေးလည်း ရုပ်ချော သဘောကောင်းလေးပဲနေမှာနော်.. အဟိ.. ဟုတ်တယ် ဟုတ်... :)
အမရဲ့ ဒီပို့စ်လေးက ကလေးကြီးလာရင်အမှတ်တရပဲနော်..
အရမ်းကောင်းတာပဲ မိခင်မေတ္တာကို ခံစားလို့ရတယ်..။
အမ.. ကလေးကို တနှစ်တခါ အမှတ်တရလေး ဓာတ်ပုံရိုက် ဒါမှမဟုတ် ၃ လတခါ ရိုက်ပီး သူ့ရဲ့တိုးတက်မူမှတ်တမ်းလေးကို ပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါ မိဘ၂ပါးစလုံးရော သူရော အတိတ်ကို ပြန်ပီး မေတ္တာတွေ ခံစားလို့ရတယ်အမ..။
ဖေဖေက မြတ်နိုးငယ်ငယ်က အဲလိုလေးတွေ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပေးတယ်။ စိတ်ကောက်တဲ့ပုံလေးတွေက အစ ရှီတယ် အမရေ..။သိလား။
သားလေး လေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည်.. နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်သည်အထိ မိဘ၂ပါးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်ဖြင့် ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှသည့် သားလှရတနာ ဖြစ်ပါစေသား..။
သားလေးက ၄ နှစ်တောင် ပြည့်ပြီလား။ ဓာတ်ပုံတော့ မတင်ဘူးပေါ့လေ။
သားလေးရဲ့ ကောင်းသော မွေးနေ့မွန်မှသည် ချစ်တဲ့ ဖေဖေမေမေတို့နဲ့အတူ အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါစေ။ ကိုယ်လိုချင်တာတွေ ရပြီး ၀ါသနာပါတာတွေကိုလည်း ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်စွာ လုပ်နိုင်သူလေးဖြစ်ပါစေ။
သားလေးကို ချီဖူးသလိုလိုတောင် ခံစားလိုက်ရတယ်။ deja vu ထင်ပါတယ်။ ဟဲဟဲ။
ံHappy Birthday သားသားရေ..
ယဉ်ကျေးလိမ်မာပြီး ပညာတော်တဲ့ ကလေးလေး ဖြစ်မှာပဲ လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Happy Birthday ပါ အစ်မတန်ခူးရဲ့ သားသားလေးရေ။
တန်ခူးရဲ့သားလေး မွေးနေ့ အတွက် ဆုတောင်းပေးတယ်နော်...
ကျန်းမာပြီး ပညာတွေ ထူးထူးချွန်ချွန် တတ်မြောက်တဲ့..
မိဘကျေးဇူး သိတတ်တဲ့... အစစ အရာရာ မတောင့်မတ မကြောင့်မကြ လိုလေသေးမရှိ ပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ သားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ လို့ ...။
သားသားလေးအတွက် Happy Birthday. သားသားလေး ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
သားသားလေး ၄ နှစ်မှသည် နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက် ပြုံး ပျော် နေ နိုင်ပါစေ ။
့happy birthday ပါ သားသားလေးရေ။ ကြီးလာရင် မင်းမေမေရဲ့ မေတ္တာအပြည့်နဲ့ ရေးထားတာလေးကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ရမယ်။ ကောင်းခြင်းအဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံပြီး မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ သားလိမ္မာလေးဖြစ်ပါစေ။ :)
သားသားလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်း ခညောင်းနိုင်ပါစေ။
သားလေး နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်သောသူများနှင့် အေးချမ်းပြည့်ဝသောဘ၀ ပိုင်ဆိုင်ရပါစေ..
မမြင်ဖူးဘူးဆိုပေမဲ့ ပျော်စရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါအုံး။ ဘာတွေထူးထူးဆန်းဆန်း ပြန်ပြောနေမယ်မသိ....း)
ဦးဦးမျိုးရေ… ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ…စင်္ကာပူလာလည်ရင် သားသားနဲ့ တွေ့ ရအောင် အကြောင်းကြားလိုက်နော်…
နုရေ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ… နုကလဲ သြဂုတ်လား… ဒါဆို ချောမှာ သေချာပြီ… သဘောကောင်းတာ ကတော့ သိပြီးသား… မွေးနေ့ ပို့ စ်လေးတင်ဦးလေ….
ရွာသားလေးရေ… အမေနဲ့ ဝေးနေသူတွေရဲ့ အလွမ်းပေါ့… ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်…
မြတ်နိုးရေ… ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ လုပ်ဖြစ်တယ်… ခုမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီ… မြတ်နိုးဖေဖေက မြတ်နိုးကို တော်တော်ချစ်တယ်နော်… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေညီမရေ…
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ တီတီပန်… သားသားကို တီတီပန် ချီဖူးတယ်လေ….
တီတီချိုသင်းရေ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေခင်ဗျာ….
ကျေးဇူးပါ မ ရ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…
မဇနိရေ… ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ… ပြည့်ပါစေ….
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးဦးကောင်းကင်ကို… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေခင်ဗျာ….
တီတီဂျစ် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေခင်ဗျာ…. ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ….
ကျေးဇူးပါ ဦးဦးခင်ဗျာ… ဦးဦး ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေခင်ဗျာ….
ဦးဦးစေး ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေခင်ဗျာ…. ကျေးဇူးပါ
တီတီအိမ့် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေခင်ဗျာ…. ကျေးဇူးပါ
ဦးဦးတားမြစ်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေခင်ဗျာ …. ကျေးဇူးပါ
Swe Zin said...
I like your tale and i miss my mom.
I believe my mom felt like this at this time.I wish ur family pass the time happily with ur son.
Thar Thar Lay
အမရေ မရောက်ဖြစ်တာလည်း RIT ကျောင်းသူ
နောက်ပိုင်းထဲကပဲ ။ ကော်မန့်ထားခဲ့ချင်သော်လည်း မထားခဲ့ ရဘူး ။
ဒီတစ်ခါတော့ ထားခဲ့ပြီ အမရေ ။
အမေတစ်ယောက်၇ဲ့ သားအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာ ကိုလည်း ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုရင်းပေ့ါ
အမ သားလေးလည်း မိဘကျေးဇူးကို သိတတ်၊ နားလည်တတ်၊ ဆပ်တတ်သော
သားလိမာလေး ဖြစ်ပါစေဗျာ။ နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်များကို ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
မေမေ တန်ခူးက..ရေးတက်လိုက်တာ..ချစ်စရာ လေး ။
အမရေ အမရဲ့ သားသားလေး အကျင့်လေး တွေက အိမ်က မောင်တော် ဘုရားရဲ့ ငယ်တုန်းက အကျင့်နဲ့ တူလိုက်တာ.. စကားလုံး စုံအောင် မသင်ပေး ရသေးခင် သူ့ဟာသူ နာမည် ပေးလိုက်တာများ လက်ဒူးခေါင်း (တံတောင်ဆစ်)၊ ၀ုတ်ဝုတ်ကြီး (ဘုရားရှေ့က ခြင်္သေ့ ကြီး) အများကြီးမှ အများကြီး.. မသင်ပေးရင် သူ့ဟာ သူ လေ့လာပြီး နာမည်ပေး ပစ်လိုက်တော့တာ.. မိဘရဲ့ စကားကျကို ပြန်ထောက်တတ် တာချင်းလဲ တူပါပေ့... ကြုံတုန်း အတင်းပြော လိုက်ဦးမယ် ခေါင်းမာတာချင်း မတူစေနဲ့ အမရေ.. သားသားကို ပြောပေးနော် Happy Belated Birthday ပါလို့
ရွှေဇင်ရေ… အမေအားလုံးရဲ့ မေတ္တာက အဲဒီထက် ပိုရင်ပိုမယ် မလျော့တာတော့ သေချာတယ်… ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်…
ကိုတာတူးရေ… ဟုတ်ပါရယ်… ဘလော့ဂ်တွေပေါ်လဲ မတွေ့ ပို့ စ်အသစ်လဲမတွေ့ တော့ ကိုတာတူးတို့ ဘလော့ဂ်ဆီဗုံးထဲတောင် သွားအော်မိသေး… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…ကျေးဇူးပါ
မကေရေ… ကျေးဇူးပါ… ဒီက မကေတို့ ရေးတတ်ပုံကို အမြဲအားကျနေတာ….
လှိုင်ရေ… ဟုတ်လား… ဒါဆို ကြီးလာရင် စာလဲရေးတတ်မယ်ထင်တယ်နော်… အင်း… ခေါင်းကတော့ အတော်ကိုမာတာ… ဒါလဲတူသွားပြန်ပြီ… ဆုတောင်းလေးအတွက်ကျေးဇူးပါနော်…